नेपालगञ्जमा बोटानिकल गार्डेन बन्दै – Sadarline
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जमा बोटानिकल गार्डेन बन्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० विमानस्थलनजिकै ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक गार्डेन बन्न लागेको हो । गार्डेनका लागि प्रदेश सरकारले बन कार्यालयमार्फत करीब डेढ करोड रकम उपलव्ध गराएको छ । वडा नं. २० को कार्यालयले गार्डेन निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आहवान गरेर पहिलो चरणको काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागिएको गार्डेन दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । नक्सासहितको वजेट शीलिङ बनाइएकाले केही दिनभित्रै निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिने उनले बताए । गार्डेनमा हरियो, आकर्षक मैदानसहित विभिन्न फूल, विरुवाहरु लगाउनुका साथै भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिने छ । गार्डेन क्षेत्रमा पिकनिकस्थल, आवास, चौतारी, आकर्षक बत्ती, टिकट काउन्टरलगायतका संरचना बनाइने भएको हो ।
यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर, पुरैनीको कान्ती ताल, धम्वोझीको वाटर पार्कलाई पनि आकर्षक र पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यसअघि रानीतलाउलाई पुनःनिर्माण गरि वोटिङ सञ्चालन गरिसकिएको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गरी आर्थिक उन्नतिका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर दर्जन बढी पार्क निर्माण गर्न लागेको छ ।
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : जिल्ला कारागार बाँकेमा कैदी बन्दीलाई भेट्न आएका एक जनाको साथबाट सशस्त्र प्रहरीले प्रतिबन्धित लागुऔषध बरामद गरेको छ । कैदीबन्दी भेट्न आएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का गोबिन्द सुनारको साथबाट कारागारमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले १ सय ५० मिलीग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो । सुनारको झोला जाँच […]
२४ असार २०७६, मंगलवार १५:०६
८ चैत्र २०७६, शनिबार १४:१५
विप्लवका रौतहट इञ्चार्जसहित दुई जना पक्राउ